နိုင်ငံခြားအလုပ်လုပ်သူအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း - intouchmedicare
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်လုပ်သူများအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည်လုပ်သင့်သောအရာဖြစ်သည်၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥပဒေများအပြင် အဖွဲ့အစည်း၏ ပုံရိပ်ကဲ့သို့သော ကဏ္ဍများစွာတွင် အဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်ဘေးကင်းရေး ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း အပါအဝင်၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုနှင့် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့် မှန်ကန်မှုတို့ကို လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။Intouch Medicare Clinic တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ် Work Permitပါမစ်လျှောက်ထားရန် သို့မဟုတ် အလုပ်ပါမစ်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Work Permit အတွက်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည်ဘာတွေစစ်ရပါသလဲ
အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်ပါမစ်လျှောက်ရန် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရမည်ဟုဖော်ပြထားသည့် ဥပဒေစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ကို ထိခိုက်စေမည့် ပြင်းထန်သော သို့မဟုတ် ဆိုးရွားသော ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာအဖွဲ့အစည်းအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ပါ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားတွေကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီသည်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာသူဟု သတ်မှတ်သည်။ လူမှုရေးတာဝန်များ သို့မဟုတ် အနီးနားရှိအသိုင်းအဝိုင်းများသို့ ကူးစက်နိုင်သည့်ရောဂါအန္တရာယ်ကို လျှော့ချစေနိုင်ပါသည်။
Work Permit သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည်ပတ်စပို့မိတ္တူလိုအပ်လိမ့်မည်။
အလုပ်ငှားသူ (သို့) သဌေး၏မှတ်ပုံတင်
အလုပ်ငှားသူ (သို့) သဌေး၏အိမ်ထောင်စုစာရင်း
ကုမ္ပဏီစာချုပ်လက်မှတ် + ကုမ္ပဏီတံဆိပ်
Work Permit အတွက်ကျန်းမာ‌ရေးစစ်ဆေးခြင်းသည်ဘာတွေစစ်ရမလဲ?
Work Permit အတွက်ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာသည်အောက်ပါစာရင်းအတိုင်းကျန်းမာ‌ရေးစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါမည်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း / Physical Examination
သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ အရပ် တိုင်းတာခြင်း / Vital Signs
အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း / Chest X-ray
မူးယစ်ဆေး၀ါးစစ်ဆေးခြင်း / Urine Met,Amphetamine
ဆစ်ဖလစ်သွေးတုံ့ပြန်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း / VDRL
AIDSရောဂါစစ်ဆေးခြင်း / Anti HIV
Work Permit သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်စာအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည် ၆မျိုးရောဂါရှိသောထောက်ခံစာဟုခေါ်သောစာရွက်စာတမ်းကိုဆရာ၀န်အားဖြင့်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။၎င်းမှာ
အနာကြီးရောဂါ / Leprosy
အန္တရာယ်ရှိသောအဆင့်တီဘီရောဂါ / Advandced Pulmonary Tuberculosis
အရက်စွဲရောဂါ/ Chronic alcoholish
1. Work Permit အတွက်ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာသက်တမ်းသည်30ရက်သာလျှင်ကြာရှည်ခံသည်။ဆေးလက်မှတ်လာတောင်းကနေ့စပြီး30ရက်သာလျှင်သုံးခွင့်ပြုသည်။
2. ကျေးဇူးပြု၍ အစိုးရဌာနနှင့် ဆေးလက်မှတ်ပါအချက်အလက်များကို ဦးစွာစစ်ဆေးပါ။စာရင်းများနှင့် ပုံစံများသည် အစိုးရ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်းကိုစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းသည်မှန်ကန်စွာ အသိအမှတ်ပြုထားသော အဆင့်မီဆေးခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးသည် ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ကြောင်း စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံခြားသားအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပရိုဂရမ်သည် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သို့မဟုတ် အလုပ်ပါမစ်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆေးစစ်ချက်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးသည့်စာရင်းအပြည့်အစုံနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းသည် တိကျသောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုရလဒ်များရရှိရန် သေချာစေရန် အတွေ့အကြုံနှင့် စံချိန်စံညွှန်းရှိသော စက်ကိရိယာများရှိသည့် အထူးကုဆရာဝန်များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆင်ပြေမှုရှိပြီး ဌာနခွဲ ၄ နေရာမှ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးရေးသည်အချိန်မဖြုန်းဘဲ မြန်ဆန်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စိတ်နှလုံးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးပြည့်၍ချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု နှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဂရုစိုက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် အများအပြား ရှိသည်။
Intouch Medicare Clinic သည် အလုပ်ပါမစ်လျှောက်ရန် သို့မဟုတ် အလုပ်ပါမစ်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအတွက် စကားပြန်ရှိပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်၏အနီးနားရှိ ဆေးခန်းကို Google တွင်ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အဆက်အသွယ်လမ်းကြောင်းများမှ တဆင့် မေးမြန်းခြင်းဖြင့် သင့်အိမ်အနီးရှိ ဌာနခွဲမှ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အလိုအပ်ဆုံးသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် တိကျသောရလဒ်များရရှိနိုင်စေရန် အကြံဉာဏ်များကို ပေးဆောင်ရန်အသင့်ရှိပါသည်။